U dejiso fiidiyow sida gidaarrada Windows 7 | Wararka Gadget
Fidiyow ahaan muxuu u dhiganayaa darbiga Windows 7 desktop-ka? Tani waxay noqon kartaa mid ka mid ah howlaha ugu adag in la qabto, inkasta oo kuwa raacay taariikhda nidaamyada kala duwan ee ay soo jeediso Microsoft, tani ma noqon doonto wax cusub.
Xaqiiqdu waxay tahay in gudaha Windows Vista Microsoft waxay u timid inay dhigto shaqo xiiso leh taas oo ay jeclaayeen dad badan, oo la mid ah magac ahaan DreamScene waxay siisay suurtagalnimada in la dhigo fiidiyoow wax kasta oo sida gidaarka dusha sare ah; nasiib daro Microsoft waxay go'aansatay inay ka tirtirto muuqaalkan noocyada dambe, iyadoo tixgelinaysa inay ku xad gudbeyso xasiloonida iyo shaqooyinka nidaamka qalliinka. Faa'iido ahaan, waxaa jira aalad yar oo aan ku dalban karno Windows 7, taas oo si aan caadi aheyn u cunin qaddar badan oo ilaha nidaamka ah.
1 Soo dejiso oo socodsiiso DreamScene Windows 7
2 Abuur dhibic soocelin ah Windows 7
3 Oggolaanshaha maamulka ee leh 'DreamScene'
4 Ku daaro fiidiyow adoo adeegsanaya DreamScene
Soo dejiso oo socodsiiso DreamScene Windows 7
DreamScene waa aalad yar oo aad awoodid ka soo deg linkiga soo socda, taas oo nasiib wanaag dad badan, uma baahna in la rakibo ee waa in la dilo. Tani waa sababta oo ah qalabku waa mid la qaadi karo, taas oo macnaheedu yahay inaan xitaa ka wadi karno usb USB ah. Waxaa jira xeelado gaar ah oo ay tahay inaan qaadano si aan u xaqiijino hadafkeena, wax aan hoos ku xusi doono si looga fogaado nooc kasta oo waxyeello u geysata nidaamka qalliinka iyo jahwareerka marka fiidiyow lagu ciyaarayo muraayadda Windows 7 desktop.
Abuur dhibic soocelin ah Windows 7
Qalabka loo yaqaan DreamScene waa mid la qaadan karo, kaas oo ku tiirsan tilmaamaha qaarkood ee wax ka beddeli doona Diiwaanka Windows 7; Sababtaas awgeed, waa lagama maarmaan in la sameeyo nidaamka soo celinta dhibic haddiiba ay wax u yimaadaan si ay u carqaladeeyaan; DreamScene waxay ku wadi kartaa labada nooc ee Guriga, nooca xirfadda iyo nooca Ultimate sida ku cad soosaaraha, inkasta oo xilligan aanan hubin karin inuu ku shaqeynayo Windows 8.1 maxaa yeelay ma awoodno inaan ku tijaabino aaladda noocaas ah.
Oggolaanshaha maamulka ee leh 'DreamScene'
Waxa labaad ee xisaabta lagu daraa waa taas DreamScene ma sameyso "laba jibbaar" oo fudud, maaddaama isbeddelada lagu sameyn doono "Windows 7 Diiwaanka" ay yihiin kuwo dib loo noqon karo; Sababtaas darteed, mar alla markii aad furto 'DreamScene fulintiisa' waa inaad ku xushaa badhanka midig iyo ku socod "oggolaanshaha maamulka". Daaqad yar ayaa isla markiiba soo muuqan doonta, taas oo leh 2 ikhtiyaar oo keliya oo laga kala xusho, kuwaas oo kala ah:
Xulashada ugu horeysa ayaa dhaqaajineysa muuqaalka, shaashad yar oo "birbirqaya" (biligleynaya) ayaa laga yaabaa in la ogaado. Markaad barkinta ka furayso astaantan badhanka kale, waxaad awoodi doontaa inaad bogaadiso isla saamayntaas, inkasta oo isbeddel kasta oo lagu sameeyo "Windows 7 Registry" lagu soo celin doono caadi.
Ku daaro fiidiyow adoo adeegsanaya DreamScene
Haddii aad farta ku fiiqdo tilmaamaha jiirka in yar oo ka mid ah meel bannaan oo ka mid ah desktop-ka Windows 7 oo aad midig-gujiso, waad ogaan doontaa taas hawl cusub ayaa lagu dhex daray macnaha guud, oo loola jeedo DreamScene.
Waqtigaan la joogo, DreamScene ayaa soo muuqan doonta iyada oo aan suurtagal ahayn in la xusho, iyada oo la qaadanayo xilligan xaadirka khiyaanada yar ee aan hoos ku soo jeedinayno:
Waa inaad furtaa Windows Explorer.
Tag meel aad video ku leedahay qaab MPEG ama AVI ah.
Dooro fiidiyahaas badhanka midig ee midig.
Xulashada macnaha guud, ka dooro «U dhig sida Desktop Bakcground«.
Ka dib markaad sameyso talaabada ugu dambeysa, isla markiiba waad u bogi kartaa taas fiidiyowgu wuxuu u muuqan doonaa sida waraaqda gidaarka kumbuyuutarka ee Windows 7; Haddii aad dooratay filim dhammaystiran, wuxuu ciyaari doonaa min bilaw ilaa dhammaad, in kasta oo dhawaaqa la'aan.
Haddii aad mar labaad midig u-riixdo desktop-ka (iyadoo filimku jilayo) waad bogi kartaa taas DreamScene waxay kuu ogolaaneysaa inaad hakad gasho fiidiyaha. Shaki la'aan, tani waa muuqaal aad u fiican oo aan lahaan karno haddii daqiiqad gaar ah aan dooneyno inaan animation ama fiidiyoow nooc kasta ah u helno sida warqadda gidaarka ee Windows 7.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Software » Sida loo dejiyo fiidiyow sida gidaarrada Windows 7
Sidee looga soo kabtaa WMP mini player-ka Windows 7
Maamul Windows DUAL Boot oo leh tallaabooyin yar